आजकल तपाईकोतिर फेरी लाउन आउँछन् कि आउँदैनन् ? हेर्नेकथामा फेरी लाउने ‘जोगीको कथा’ - VOICE OF NEPAL
आजकल तपाईकोतिर फेरी लाउन आउँछन् कि आउँदैनन् ? हेर्नेकथामा फेरी लाउने ‘जोगीको कथा’
३ चैत्र २०७५, आईतवार ०९:०९ 149 ??? ???????
युट्युबमा हिट बनिरहेको ‘हेर्ने कथा’ को रचना गर्भ बीबीसी मिडिया एक्सनबाट सुरु हुन्छ। त्यतिबेला विद्या चापागाईं बीबीसी साझा सवालको प्रस्तोता थिइन्, कमल कुमार निर्माता। त्यहाँ उनीहरुले पाउने पैसा राम्रै थियो, कार्यक्रम चर्चाको उचाइमै थियो। यो २०७४ सुरूकै कुरा हो। भनिन्छ नि पैसा, चर्चाले मात्र सन्तुष्टि दिने सामर्थ्य राख्दैन। यो दर्शन कमल–विद्याको व्यवसायिक जीवनमा ठ्याक्कै मेल खान्छ।
अर्थात् उनीहरु नेताहरुका अवास्तविक ‘ठूला गफ’ होइन जनताका सामान्य कथा बुन्न चाहन्थे। रहरलाग्दो चमकदमक जीवनशैली होइन दूरदराजका मानवीय अनुभव सुनाउन चाहन्थे। अहिले लाखौंको मन छुन सफल ‘हेर्ने कथा’ यही ‘स्पिरिट’ को उत्पादन हो। तर ‘हेर्ने कथा’ उत्पादन प्रक्रिया भित्रको कथा फरक छ। ललितपुरको सानेपास्थित एउटा कोठामा रहेको कार्यालयमा विद्या र कमलले हेर्ने कथाभित्रका थुप्रै ब्यथा सुनाए।
१६ वर्ष भयो उनीहरुको चिनजान भएको। आरआर क्याम्पसमा सँगै पढे। पछि पत्रकारितामा थोरै समय एउटै संस्थामा बिताए। बीबीसीमा काम गर्न थालेपछि उनीहरुको मित्रता अझ झाँगिंदै गयो। चिया पिउँदा होस् वा बाटोमा हिँड्दा, सानो काम गरेरै कसरी सन्तुष्ट हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा दुईबीच छलफल भइरहन्थ्यो।
सामाजिक परिवेशका वास्तविक कथा जसलाइ मुख्य मिडियाले त्यत्ति अन्तर्वस्तु बनाएका छैनन्। कसैको संघर्षको कथा, कसैको जीवन भोगाईको कथा जसले सिंगै समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ, मानवीय जीवनको अनुभव सुनाउँछ। तिनलाई कसरी विषय बनाउने भन्नेमा उनीहरुको छलफल भइरहन्थ्यो। यत्तिकैमा एकदिन दुवैले बीबीसीको जागिर छाडेर यस्ता विषयलाई कथा बनाउने अभियानमा लागे ।
यिनै सामान्य कथाले धेरै मानिसलाई प्रभाव पारिरहेका छन्। आफूलाई जीवनमा सबैभन्दा दुःखी सम्झनेहरुले कथा हेरेपछि बिरहका गीत गाउन छाडेका छन्। यस्तो प्रतिक्रिया दर्शकको कमेन्टबाट विद्या र कमलले पाउँछन्। उनीहरु कुनै पनि कमेन्ट नछुटाई पढ्छन्। हरेक कमेन्टमा लाइक गर्छन्। किन कि, उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमाई भनेकै दर्शकको प्रतिक्रिया हो, माया हो। त्योभन्दा धेरै कमाउन सकेका पनि छैनन्।
‘हेर्ने कथा’ को युट्युब च्यानलमा हालसम्म १ लाख २३ हजार ‘सस्क्राइब’ पुगेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा ‘अपलोड’ भएका प्रत्येक कथामा २ देखि ३ लाखसम्म ‘भ्यूज’ छ। सबैभन्दा धेरै ‘भ्यूज’ भएको कथा ‘बाबु छोरीको कथा’ हो, जसलाई ९ लाख बढीले हेरेका छन्।(
आजकल तपाईंकोतिर फेरी लाउन आउँछन् कि आउँदैनन् ? आज फेरी लाउने ‘जोगीको कथा’
किरात जातिले मनाए प्रकृति पूजाको पर्व उभौली
मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन, ज्येष्ठ ०४ गते शनिबार \_ मई १८ तारिखको राशिफल
श्री संतोषी माताले सबैको कल्याण गरुन,ज्येष्ठ ०३ गते शुक्रबार\_मई १७ तारिखको राशिफल
माता बंगलामुखिले सबैको कल्याण गरुन ,ज्येष्ठ ०२ गते बिहीबार१९ मई १६ तारिखको राशिफल
माता पथिभाराले सबैको कल्याण गरुन,ज्येष्ठ ०१ गते बुधबार मे १५ तारिखको राशिफल
सद्गुरुका १० वचन जसले तपाईको सोच र जीवन बदलिनेछ !
भोली बुधबार इतिहासकै अति पवित्र दिन मोहिनी एकादशी । यी कार्य गरे हुनेछ चमत्कारीक लाभ !
धनी हुने मानिसको हस्तरेखा कस्तो ? तर बिज्ञानले यसाे भन्छ !